Semalt: Inhouse SEO कसरी एक SEO एजेन्सीको साथ काम गर्दछ?
धेरै कम्पनीहरूले एक SEO विशेषज्ञ भाँडामा लिने निर्णय गर्छन् जो Google मा यसको ब्रान्डको वेबसाइटको दृश्यताको वृद्धिको लागि जिम्मेवार हुनेछ। के यसको मतलब एसईओ एजेन्टले बाह्य मद्दत बिना सबै कामहरू गर्न सक्षम हुनेछ? Inhouse SEO र एजेन्सी बीच सहयोग अक्सर आवश्यक छ। कुन हदसम्म?
Inhouse SEO र एजेंसी
एक एसईओ विशेषज्ञ भाँडा एक उद्यमी गुगल मा साइट को दृश्यता सुधारको उद्देश्य गतिविधिहरु को लागी खर्च को अन्त मा लाग्न सक्छ। ब्यापार मालिकले एजेन्सीमा भर पर्नुको सट्टा खोजी ईन्जिनको ट्राफिकको लागि विशेषज्ञलाई जिम्मा लिन सक्छ। दुर्भाग्यवश, त्यस्ता कर्मचारी प्रायः आत्मनिर्भर हुन्छन् - धेरै उसलाई कुन कर्तव्य सुम्पिन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ।
"गुगल खोजी ईन्जिनमा दृश्यता निर्माण गर्न धेरै समय चाहिन्छ। त्यहाँ केहि कामहरू छन् जुन तपाईंले आफैंले गर्नुपर्दछ, तर त्यहाँ थुप्रै कार्यहरू पनि छन् जुन तपाईं आफैं गर्न सक्नुहुन्न।"
एसईओ एक क्षेत्र हो जुन निरन्तर परीक्षण र विश्लेषणको आवश्यक पर्दछ - त्यहाँ विशेषज्ञहरू छैनन् जसले सबै कुरा जान्दछन्। यो सम्झनु लायक छ कि एजेन्सीले पेशेवरहरू नियुक्त गर्दछ जुन अनुभव र ज्ञानको स्तरमा भिन्न हुन्छन्। उनीहरू संयुक्त रूपमा आफ्नो परीक्षणबाट निष्कर्ष कोर्न सक्छन् र सार्वजनिक रूप मा परिणाम साझा छैन।
Inhouse SEO यस सम्बन्धमा एक्लो छ। त्यहाँ एल्गोरिथ्ममा परिवर्तनहरू परीक्षण गर्न प्राय व्यापार समय हुँदैन। थप रूपमा, एजेन्सीहरूले प्राय: पृष्ठहरूको एक धेरै ठूलो संख्याको प्रबन्ध गर्दछ, त्यसैले एल्गोरिथ्ममा कुनै परिवर्तन भएमा एजेन्सीहरूले छिटो निर्धारण गर्न सक्दछ कि के परिमार्जन गरिएको छ। एक इनहाउस विशेषज्ञ प्राय: बाह्य विश्लेषणमा निर्भर गर्दछ र त्यसमा आधारित निर्णय गर्दछ।
Inhouse SEO लाई एक साइट अप्टिमाइजेसनको साथ मद्दतको आवश्यक्ता पर्दैन, तर प्राय: समर्थनको आशा गर्दछ, जस्तै। लिंक भवनको साथ। यहाँ गतिविधिका केहि क्षेत्रहरू छन् जसमा इनहाउस एसईओ एजेन्सीसँग काम गर्न सक्दछ यदि आवश्यक छ भने:
प्रायोजित लेख: लि get्कहरू प्राप्त गर्न महँगो र समय खपत गर्ने काम हो। एउटा ईन्ग एसईओ रोजगार गर्ने कम्पनीले उसलाई पछाडि अफिसको निर्माण गर्न सुम्पन सक्छ, तर यो यस्तो काम हो जुन प्राय: परिणामहरू लिनको लागि लामो समय लिन्छ। सायद कुनै पनि उद्यमीले यो खर्च गर्न सक्दछ। एक लि specialist्क निर्माण विशेषज्ञले ह्वाइटप्रेस वा लिंकहाउस जस्ता पोर्टलहरूको स्रोतहरू प्रयोग गर्न सक्दछ, तर निश्चित रूपमा यसलाई सीमित गरिनु हुँदैन। उसले दिईएको बजेटको साथ उत्तम सम्भावित नतिजाहरू पनि तयार पार्नुपर्दछ, जसको अर्थ हो कि उनले स्रोतहरू खोज्नुपर्दछ जहाँ उसले आकर्षक मूल्यमा धेरै उच्च-गुणवत्ता लि links्कहरू प्राप्त गर्दछ।
प्राय: पैसा बचत गर्ने तरिका भनेको सेवा प्रदायकहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनसक्दछ जुन उल्लेख गरिएको पोर्टलमा लिंकहरू प्रस्ताव गर्दछ। यस तरिकाले, यी प्रदायकहरू धेरैले राम्रो मूल्य प्रस्ताव गर्न सक्दछन्। अर्को तरिका एसईओ कम्पनीहरूको संसाधनहरूमा भरोसा राख्नु हो - केहिले यसको साइटहरूमा लिंकहरू प्रकाशन गर्ने विकल्प प्रदान गर्दछ। प्राय: यी धेरै राम्रा SEO प्यारामिटरहरूको साथ वेबसाइटहरू हुनेछन्, तर लोकप्रिय पोर्टलमा लिंकहरू भन्दा कम खर्चिलो। दुर्भाग्यवस, केवल चयनित ब्रान्डहरू यसको स्रोतहरू साझेदारी गर्न इच्छुक हुन सक्छ - मुख्य रूपमा साना एजेन्सीहरू।
फोरम, टिप्पणी, घोषणाहरू र अधिक
फोरम, टिप्पणी, घोषणा र अधिक: अर्को दीर्घ-कार्य हो जुन फोरममा खाता सिर्जना गर्नेहरूको बीचमा आवश्यक पर्दछ। एजेन्सी पहिले नै केहि वर्षौं भएको हुन सक्छ र ती खाताहरूबाट टन पोस्टहरू थपिएको छ। यस बीचमा, केहि वेबसाइटहरूले नयाँ पंजीकरणको सम्भावनालाई रोक्दछन्, जहाँसम्म तपाईं यसमा लिंकहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ, यी वेबसाइटहरू प्रयोग गर्न सकिदैन यदि तपाईंसँग पहिले नै खाता छैन।
अर्को मुद्दा ठेगाना डाटाबेस हो जसमा तपाईं लि get्कहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसको निर्माण पनि जारी छ। प्राय: वेबमा तपाईं फ्रिल्यान्सरहरू वा साना एजेन्सीहरूबाट तयार-निर्मित डाटाबेसहरूको प्रस्तावहरू आउन सक्नुहुनेछ। यदि इनहाउस एसईओ एजेन्टले त्यस्ता सूचिहरू प्रयोग गर्दछ भने उसले प्रायः साना वा ठूला कम्पनीहरूबाट ती प्रस्तावहरू खरीद गर्दछ। र त्यसपछि उसले आफ्नै लिंकहरू प्राप्त गर्दैन, तर उसले लि strategy्क गर्ने रणनीति तयार गर्दछ, कुन URL हरूलाई लि get्कहरू प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दछ भनेर निर्धारण गर्दछ।
प्रतिलिपि अधिकार: सामग्री निर्माण लि obtain्कहरू प्राप्त गर्न आवश्यक छ, प्रायोजित लेखहरूबाट पनि। केही इनहाउस एसईओले पनि प्रतिलिपि अधिकारकर्ताहरूलाई पोष्ट र टिप्पणीहरूको सामग्री तयार गर्नका लागि कमिशन गर्दछ - तिनीहरू केवल पढिसके पछि प्रकाशनमा सहमत हुन्छन्। त्यस्ता अर्डरहरू प्रतिलिपि अधिकारसँग कडाईका साथ काम गर्ने कम्पनीहरूमा जान सक्दछन्, तर प्रायः यो एसईओ एजेन्सी पनि हुन्छ, उदाहरण: जब तपाईं प्रायोजित लेखहरू मूल्यमा वा थप शुल्कको लागि अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ, यो सामग्रीको तयारी प्रस्ताव गर्नुहोस्। नियमको रूपमा, यस अवस्थामा, इनहाउस एसईओ आफैंले ठेकेदारको खोजीबाट राजीनामा गर्दछ, किनकि यसलाई प्रस्तावहरूको तुलना र कामको गुणस्तरको पछिको प्रमाणीकरण आवश्यक पर्दछ - यो एजेन्सीका सेवाहरू प्रयोग गर्न बढी लाभदायक हुन्छ।
लिंक निर्माण कार्यहरू
लि building्क निर्माण कार्यहरू ती सबै हुँदैनन् जुन इनहाउस एसईओ विशेषज्ञले एजेन्सीको सहयोगको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। ठूला व्यवसायहरूको मामलामा कम्पनीले एसईओ विशेषज्ञलाई भाँडामा लिन सक्छ, अन्य चीजहरूको बीचमा समन्वय गर्न र कार्यहरू प्रमाणित गर्नका लागि एजेन्सी। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, इनहाउस एसईओको कार्य समावेश हुन सक्छ:
एजेन्सीले लि links्क गरिरहेको कुराको प्रमाणीकरण
एजेन्सीले लि links्कहरूको लि what्कको प्रमाणिकरण: यसले लि strategy्क गर्ने रणनीति उपयुक्त छ वा छैन र पर्यटन ल्याउन सक्छ। गतिविधिहरूको ठूलो स्तरको साथ, यी कार्यहरूको प्रमाणिकरणमा पनि लामो समय लाग्न सक्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा, एजेन्सीको रिपोर्टहरूले प्राप्त लिंकहरूको सूची समावेश गर्नुपर्दछ।
सामग्रीको विकासको सुपरिवेक्षण गर्दै
सामग्रीको विकासको सुपरिवेक्षण गर्दै: एसईओ को एक महत्त्वपूर्ण तत्व वेबसाइट मा एक मूल्यवान सामग्री र आन्तरिक लिंकिंग प्राप्त गर्नु हो। विशेषज्ञले जाँच गर्नु पर्छ कि प्रस्तावित सामग्री वास्तवमा दिएको मामलामा उत्तम समाधान हो कि भनेर। कुञ्जीशब्दहरू र आन्तरिक लि properly्कहरू राम्रोसँग चयन गरिएको छ कि छैन यो विश्लेषण गर्न लायक छ। राम्रोसँग गरिएको काम गुगलको जैविक परिणामहरूमा वेबसाइटको दृश्यता वृद्धिमा ठूलो महत्त्वको हुनेछ।
एक व्यवसाय मालिक को रूप मा, के तपाइँ SEO प्रक्रिया को सबै तत्वहरु आफैं निरीक्षण गर्न सक्षम हुनुहुन्छ? दुर्भाग्यवस, यो सम्भव छैन किनकि यसको लागि विशेषज्ञको ज्ञान चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग एसईओमा सूचना प्राप्त गर्न समय छ भने, त्यसोभए तपाईंको पक्षमा त्यस्तो सुपरिवेक्षण सम्भव हुन सक्छ, तर केवल सानो स्तरमा। यो बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ कि परिमार्जन लागू गर्न एक महिना धेरै छोटो छ; यसको अर्थ लगानीको लागि भुक्तान गर्न सुरु गर्ने समय पनि हो, तर लामो अवधि पछि यी नतिजा सन्तोषजनक हुन सक्छ। यो निश्चित रूपमा एक SEO विशेषज्ञ को लागी गुणवत्ता र परिचय परिवर्तनको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न सजिलो हुनेछ।
कम्पनीहरू जससँग इनहाउस एसईओ हुन्छ प्रायः एसईओ प्रक्रियाको विशिष्ट भागहरू एजेन्सीहरूलाई आउटसोर्स गर्दछ। यो धेरै कारणका लागि हो। एजेन्सी पहिले नै एक विशिष्ट बजार वा देश मा अनुभव हुन सक्छ, एक दिइएको मामला मा सही ढ work्गले के काम गर्दछ थाहा छ, लि building्क निर्माण गर्ने आफ्नै तरिका छ वा लि links्कको प्रमाणित स्रोतहरू जुन दिएको उद्योगको लागि मूल्यवान हुनेछ। यी सबै एक ईन्हाउस एसईओ को लागी एक विशाल समय र संसाधन बचत हो।
आन्तरिक लिinking्क - - यो के हो?
आन्तरिक लिinking्क भनेको दिइएको डोमेन भित्र लि create्क सिर्जना गर्ने हो, जुन प्रयोगकर्तालाई द्रुत र सजिलो नेभिगेशनको साथसाथै साइटको सबै उपपृष्ठहरू पछि खोज इञ्जिन स्पाइडर सक्षम गर्दछ। यसका लागि वेबसाइट धेरै संरचित हुन्छ - उपपृष्ठहरू र मुख्य पृष्ठ बीच लिंक निर्माण, तपाईं जानकारी को एक निश्चित पदानुक्रम स्थापना।
थप रूपमा, लिंकिंगले रोबोटहरू र सम्भावित ग्राहकहरूलाई सम्पूर्ण साइटको भ्रमण गर्न सजिलो बनाउँदछ - तिनीहरूलाई कहाँ, के को लागी र किन जाने भनेर थाहा छ। यो उल्लेखनीय छ। सहि आन्तरिक लि्कले बाउन्स रेटलाई घटाउँछ आगन्तुकहरूलाई उपपृष्ठहरूको लागि अग्रणी गरेर रूपान्तरण अनुमति। उपपृष्ठहरु को माध्यम बाट सरल र रमाईलो यात्रा को लागी उपयोगकर्ता को लागी वेबसाइट मा रहन को लागी चासो संग यसको नुक्स र crannies खोज्न को लागी।
आन्तरिक लिinking्कको उचित योजना र यसको कार्यान्वयन राम्रो पहिलो प्रभाव र ग्राहक र रोबोटहरू द्वारा साइटको एक सकारात्मक स्वागत अनुवाद हुन पर्छ। अर्कोतर्फ, यसले खोजी परिणामहरूमा तपाईंको स्थिति बढाउनेछ, ट्राफिक र, परिणामस्वरूप, बिक्री।
त्यसोभए यदि तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छैन कि यदि तपाईंको साइटसँग सही आन्तरिक लि l्क छ भने, यस मुद्दामा केहि समय खर्च गर्न नबिर्सनुहोस्। यस मामिलामा, विशेषज्ञहरूको मद्दत प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ जसले तपाईंलाई पेशेवर सल्लाह प्रदान गर्दछ। यद्यपि यो optim अप्टिमाइजेसन उदाहरण मध्ये एक हो जुन तपाईं आफैंले गर्नु हुनेछ, केहि आधारभूत सिद्धान्तहरूको अनुसरण गरेर हामी रूपरेखा लिन चाहन्छौं।
यो ध्यान राख्नु पर्छ कि ईनहाउस SEO र एजेन्सी जिम्मेवारीहरूको दायरा प्रत्येक व्यवसायको लागि फरक हुन सक्छ। यो सम्भव छ कि विशेषज्ञले एजेन्सीसँगको परामर्श प्रयोग गर्दछ र प्रायः परिवर्तनहरू कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार हुन्छ। यस अवस्थामा फाइदा यो हो कि त्यस्ता एजेन्सीले अनुकूलनमा कम समय दिन सक्छ र परिवर्तनको लागि विश्लेषण र नवीन प्रस्तावहरूमा बढी समय खर्च गर्न सक्छ जुन महान परिणामहरू ल्याउन सक्छ।
कम्पनीमा एसईओ विशेषज्ञ भाँडामा लागी एजेन्सीको साथ सहयोग र गतिविधिहरुमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। यो महत्वपूर्ण छ कि inhouse SEO उद्योग थाहा छ। त्यसो भए, यो बजार परिवर्तन गर्न छिटो प्रतिक्रिया गर्न सक्षम हुनेछ र, उदाहरण को लागी, उपयुक्त कुञ्जी शब्दहरु प्रस्ताव।
इनहाउस SEO र एजेन्सीको बीचमा राम्रो सहयोगका of नियमहरू
दिईएको कम्पनीमा काम गर्ने विशेषज्ञ र ए बीच एक दीर्घकालीन सहयोगको लागि SEO एजेंसी सुचारू रूपमा चलाउन र सन्तोषजनक प्रभावहरू उत्पादन गर्न, यो केहि नियमहरू पालन गर्न लायक छ:
कर्तव्यहरूको विभाजन: काम सुरु गर्नु अघि, एजेन्सीको गतिविधिहरूको क्षेत्र र ईन्हाउस एसईओको कर्तव्य निर्धारण गर्न आवश्यक छ। प्रत्येक केसमा यो विभाजन फरक फरक हुन सक्छ। यद्यपि यो अवस्थालाई अनुमति न दिन महत्त्वपूर्ण छ जसमा एक पार्टीले अर्को पक्षको दायित्वका साथ हस्तक्षेप गर्दछ। यदि यो अनुमान गरिएको थियो कि कम्पनीले परामर्श बिना प्रोग्रामिंग परिवर्तन गर्दैन, तब इनहाउस एसईओले ती परिवर्तनहरू कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन। यो हुन सक्छ कि एजेन्सीको मुख्य काम लि building्क निर्माण हुनेछ, र साइटमा अप्टिमाइजेसन कम्पनीबाट एक विशेषज्ञ द्वारा हेरचाह गरिनेछ।
परामर्श - व्यक्तिगत पार्टीहरूको जिम्मेवारीको बाबजुद, यो सँगै सम्पन्न सबै कामहरू छलफल गर्न लायक छ, जसले एजेन्सीले गरेका गतिविधिहरूको प्रभावकारी मूल्या assessment्कन गर्न र अनुमानित लक्ष्यहरूको उपलब्धिमा योगदान पुर्‍याउँछ।
राम्रो सम्पर्क - एजेन्सीमा को इनहाउस एसईओ संग सम्पर्क को लागी जिम्मेवार छ भनेर निर्धारण गर्न लायक छ। यस व्यक्तिलाई सञ्चालन भइरहेका गतिविधिहरूमा राम्रोसँग जानकार हुनुपर्दछ, र आदर्शमा त्यहाँ दुई विशेषज्ञहरू हुनुपर्दछ जुन ती मध्ये एक उपलब्ध छैन। अन्य एजेन्सीका कर्मचारीहरू इनहाउस एसईओ र अन्यसँग चलिरहेको सम्पर्कको लागि प्रारम्भिक सम्पर्कको लागि जिम्मेवार हुन सक्छन्।
कार्य योजना - यो निर्धारित गर्नु पर्छ कि गतिविधिहरूको तालिका कस्तो हुन्छ र योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि को जिम्मेवार हुनेछ। एक कम्पनीले इनहाउस एसईओ गतिविधिहरू स indicate्केत गर्न चाहन्छ र एजेन्सीले ती गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्नेछ, अर्कोले एजेन्सीबाट त्यस्ता योजनाहरू प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्न सक्छ, र केही कार्यहरू इनहाउस एसईओ द्वारा गरिन्छ।
रिपोर्टिंग - यो कत्ति पटक लिनुपर्दछ र त्यस्तो रिपोर्टमा के समावेश गर्नुपर्दछ? कुन उपकरणको डाटा यसमा देखा पर्दछ? इनहाउस एसईओ ले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ कि कम्पनीले सहमति गरिएको योजना अनुसार काम गर्छ र यसले अपेक्षित परिणामहरू दिन्छ कि भनेर। रिपोर्टमा अन्तर्वार्ता, सेनुटो, सेमस्टोरम, Google खोज कन्सोल वा आह्रेफबाट चार्ट समावेश हुन सक्छ।
गतिविधिहरूमा प्रयोग हुने उपकरणहरू
गतिविधिहरूमा प्रयोग हुने उपकरणहरू - यो प्रतिस्पर्धा वा दृश्यता परिवर्तनहरूको विश्लेषण गर्न के समाधानहरू प्रयोग हुनेछ भन्ने बारे यति धेरै छैन, तर कुन समाधानहरू काम सञ्चालन गर्न मद्दत गर्दछ। निम्न उपयोगी हुन सक्दछ: गुगल कागजातहरू र स्प्रेडशिट। एजेन्सी र इनहाउस SEO सँगै सामग्री सिर्जना गर्न सक्दछन्। विशेषज्ञले लिखित लेख वा योजनाबद्ध कार्यहरू अनुमोदन गर्न सक्दछन्।
एक एजेन्सी र एक inhouse SEO बीच राम्रो सम्बन्ध महान परिणाम ल्याउन सक्छ। यद्यपि यो महत्त्वपूर्ण छ कि प्रत्येक पार्टीले थाँहा पाँउछ, आफ्नो कर्तव्य गर्दछ, र अर्कोसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्दैन।
यस पोष्टमा जानकारी प्रयोग गर्दै, र एक एसईओ वेबसाईट प्रमोशन एजेन्सीको सहयोगको साथ Semalt, तपाईं आफ्नो दर्शकलाई एक तरीकाले संलग्न गर्न सक्नुहुनेछ जुन ट्राफिक बढ्छ, दृश्यता सुधार गर्दछ र अन्तत: बिक्री बढ्छ।